Mmega ahụ nwere ike ibelata omume ime ihe ike n'ime ụmụ agbọghọ dị afọ iri na ụma - Ibi ndụ ahụike 2022
Mmega ahụ nwere ike ibelata omume ime ihe ike n'ime ụmụ agbọghọ dị afọ iri na ụma
Ndị nnyocha na-ekwu na ụmụ agbọghọ ndị nọ n'afọ iri na ụma bụ́ ndị na-emega ahụ́ mgbe nile adịghị enwekarị omume ime ihe ike, dị ka ibu ngwá agha ma ọ bụ ịlụ ọgụ n'òtù òtù.
Ọmụmụ ihe a gosipụtara na May 6 na nzukọ ọmụmụ ihe gbasara ụmụaka (PAS) kwa afọ na Washington, D.C. chọrọ ịchọta njikọ n'etiti mmemme anụ ahụ na ohere nke ibelata ime ihe ike.
"Mme ihe ike na agbata obi na-agbasa n'ogologo obodo a dum ma na-emetụta ndị ogbenye na ndị agbụrụ na agbụrụ ndị na-adịghị mma. Ọ na-ebute nnukwu ọnwụ nye ndị a metụtara, ndị na-eme ihe ike, ezinụlọ na obodo ma na-efu obodo anyị ọtụtụ ijeri dollar," ka Noe D. Romo kwuru. Onye ndu ode akwụkwọ na onye nyocha nlekọta mbụ na ahụike obodo na Mahadum Columbia.
"Ọ dị mkpa maka ụzọ ọhụrụ iji chọpụta ihe ndị nwere ike ime iji dozie okwu a ma belata ibu ọ na-enwe n'obodo anyị."
Ndị nchọpụta nyochara nzaghachi nke ụmụ akwụkwọ 1, 312 sitere na ụlọ akwụkwọ sekọndrị dị n'ime ime obodo na New York na nyocha 2008. Ụfọdụ n'ime ajụjụ a jụrụ ugboro ole ha na-emega ahụ, site na ịme oche-elu ruo ịgba ọsọ n'ime izu anọ gara aga ma ọ bụ isonye na egwuregwu n'afọ gara aga.
Ụmụ akwụkwọ aghaghịkwa ịza ma hà bu ngwá agha n'ime ụbọchị 30 gara aga ma ọ bụ na ha na-alụ ọgụ ma ọ bụ òtù n'ime afọ gara aga.
N'ime ọmụmụ ihe ahụ, pasent 56 bụ ndị inyom na-eto eto, ihe dị ka ụzọ atọ n'ime ụmụ agbọghọ bụ Latino, na pasent 19 bụ ndị Afrika-America. Nsonaazụ gosiri na ụmụ agbọghọ ndị na-emega ahụ mgbe nile nwere obere ohere itinye aka na ime ihe ike.
Kpọmkwem, ụmụ nwanyị na-eto eto bụ ndị gbara ọsọ ihe karịrị nkeji iri abụọ belatara ohere ha nwere ibu ngwa ọgụ, ebe ha na-egwu egwuregwu n'afọ gara aga wedara ohere ha abụọ ibu ngwa ọgụ na ịnọ n'ọgụ ma ọ bụ òtù. Mmega ahụ ihe karịrị ụbọchị 10 ma ọ bụ ọbụna ime ihe karịrị 20 nọdụ ọdụ n'ime izu anọ gara aga belatara ohere ha nwere ikere òkè n'òtù ọjọọ.
E nyekwara ụmụ nwoke na-eto eto nyocha ahụ, mana ejikọtaghị ọkwa mmega ahụ na igbubi ihe egwu nke omume ime ihe ike. Ndị nchọpụta na-eche na ọ pụrụ ịbụ n’ihi na ọtụtụ n’ime ndị ikom ahụ azachaghị ajụjụ nile ahụ.
"Ọmụmụ ihe a bụ naanị mmalite," Romo kwuru. "Ọ na-egosi mmekọrịta dị n'etiti mmega ahụ mgbe niile na mbelata itinye aka na omume ime ihe ike."
Ndị otu a na-atụ anya iwepụtakwu ọmụmụ ihe na-akwado njikọ a. Na mgbakwunye, ọ chọrọ inyocha ma ntinye aka dị irè na mmega ahụ nwere ike ibelata itinye aka na ndị ntorobịa na ime ihe ike.
Enwere ike ịchọta nkọwa nke ọmụmụ ihe ebe a.